Rooble oo dhibco ku luminaya dib u dhaca doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka iyo Mucaaradka, ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya cadaadis xooggan ku saaraya inuu doorashada soo gabagabeeyo ka hor dhamaadka sanadkaan 2021.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dib-u-dhaca joogtada ah ee geeddi-socodka dhamaystirka doorashada ayaa wiiqaysa kalsoonidii lagu qabay Ra’iisul Wasaaaha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo si buuxda hoggaanka amniga iyo doorashoyinka dalka loogu wareejiyay billowgii bishii May ee sanadkaan.
Doorashada aqalka sare ee 54-ka senator oo bilaabatay bishii Luuliyo ayaa weli dhamaan 3-bilood kadib, halka doorashada Golaha Shacabka ee 275-ka Xildhibaan, aysan wali bilaaban, taas oo tuhun xoogan galineysa kartida Ra’iisul Wasaaraha ee hirgalinta doorasho aan sanadkaan dhaafin.
Sida ay caddeynayaan xogo ay heshay Keydmedia Online, Farmaajo, ayaa Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, Danjiraha Boqortooyada Ingiriiska, Ms Kate Foster, Madaxa Howlgalka AMISOM, Francisco Madeira iyo wakiillo kale oo ka socda beesha caalamka la wadaagay cabsho ka dhan ah RW Rooble, wuxuuna ku eedeeyay inuu ku fashilmay hirgalinta doorasho ku qabsoonta waqtigii lagu heshiiyay.
Farmaajo, oo la rumeysan yahay inuu isagu masuul ka yahay dib u dhaca doorashooyinka ayaa Wakiillada Caalamka la wadaagay soo jeedin ah, in uu xaafiiskisu dib ula wareego hoggaanka doorashooyinka, taas oo sababi karta in mar kale, ay caasimadda dib ugu soo laabtaan Ciidamadii Badbaado Qaran.
Mucaaradku hadda waxay si gaar ah u muujinayaan wal-wal arrinkaas la xariira, sida ka muuqatay hadallo ay MW Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur jeediyeen. Waxa ay rumeysan yihiin haddii dooashooyinku ka gudbaan sanadkaan 2021, in ay dib u soo laaban karto kaalintii tabneyd ee Farmaajo, isla-markaana Rooble lagu wargalin doono inuu ku fashilmay hawlihii loo igmaday.
Dhawaan, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aan loo sii dulqaadan doonin sii socoshadda dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya, Waaxda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka u qaabilsan Africa, ayaana ugu baaqdey Farmaajo iyo Rooble inay si deg deg ah ku xalliyaan khilaafka u dhaxeeya ee saameeyay hanaanka doorashadda.
Xogo ay KON, ka heshay xaafiiska RW Rooble, ayaa sheegaya, in doorashada Golaha Shacabka la dhammaystiri doono horraanta bisha December, halka, doorashada Madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyay 10-kii Oktoobar, la filayo in ay dhacdo dhammaadka bisha December.
Ra’iisul Wasaaraha oo arrinkaan si weyn ula socda ayaa xalay ku dhawaaqay, in todobaadkaan iyo midka soo socda la guda gali doono doorashada Golaha Sahacabka, hayeeshee, xaaladaha ka soo kordhay Galmudug, ayaa sii murjineysa geedi-socodka doorashada, Gedo xal ma lahan, halka Hiiraan aan wali xal loo helin.
Maamullada Jubbaland iyo Galmudug ayaa dhankooda wali laga sugayaa in ay soo dhameystiraan, doorashada kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka JFS.
Haddii Rooble, ku fashilmo inuu si buuxda u guda-galo doorashada Aqalka hoose maalmaha soo socda, mucaaradka iyo beesha caalamku, waxay u baahan doonaan inay la yimaadaan qorshihii inta uusan sannadku dhammaan dalka loogu dhisi lahaa dawlad cusub.